ခင်ဇော် သောက် မယ်. ဆေးခါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ခင်ဇော် သောက် မယ်. ဆေးခါး	54
ခင်ဇော် သောက် မယ်. ဆေးခါး
Posted by ဇီဇီ on Jan 22, 2016 in Creative Writing, Critic | 54 comments
လူမှုဆက်ဆံရေးမယ် အချင်းချင်း ချီးကျူးပြီး …
ကျီး ဘုတ် ရိုသေ က ကောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့လည်း အပေါ်ယံ ဆန် တဲ့ ဆက်ဆံမှုလို့ပဲ ကျနော် မြင်တယ်။
တခါတလေတော့လည်း ဆေးခါး ဆိုတာ တိုက်ရတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း သောက်ပေးရတယ်။
ဒီ ရွာသက်ပဲ ၄ နှစ်ရှိတော့မယ်။
ရွာထဲ ကျနော့ ပြောမှား ဆိုမှား အပြုအမူအမှားတွေ ရှိမှာပဲ။ ဒါလည်း သေချာနေတယ်။
တဂျီးကို ထိ တက်တိုင်ထားခံရလောက်အောင်လည်း ဆိုးမိသလားတော့မသိ။
သို့လော သို့လော နဲ့ ဟိုလူထင် ဒီလူထင် မဖြစ်ရအောင် ခင်ဇော် မှားတယ် ဆိုလည်း မှားတယ်ပေါ့။
ကိုယ်ကတော့ တမင်လုပ်ထားတာ မကောင်းစိတ်နဲ့လုပ်ထားတာ ခွင့်မပြုပဲ လုပ်ထားတာ ဘာမှ မရှိဘူးလို့ လိပ်ပြာလုံလို့ ဆက်နေနေတာပဲ နော့။
အဲ။ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီးရင်လည်း ဘယ်သူ့မှ မကြောက်လို့ မက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ လည်း ဆက်နေနိုင်တယ်။ မက်နှာမပြောင်ရင် ကျန်တာ ပြောင်နေရမယ်လေ။ (နှာခေါင်းတို့ နှဖူးတို့ ပြောပါတယ်။)
ဟို တခါ အရီးကတော့ တရားဝင် တောင်းပန်တာမျိုး လေး အစဖော် ရေးခဲ့ဖူးသေးတယ်။ (အရီးတော့ လွမ်းနေတယ်)
ကျနော်တော့ ဒီ တစ်ခါ ဆေးခါး လေးတွေ ဖော်ရောင်းရမလား စဉ်းစားမိတယ်။
ကျနော် အားမနာပဲ စိတ်ဖောက်ပြန်နေရင်လည်း သူများကို နာကျင်အောင် ပြောတတ်တာမို့ ကိုယ့်ကိုလည်း ပြောချင်ပြောဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးသင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ကိုယ့် ရဲ့ အဝေဖန်ခံနိုင်ရည်ကို စမ်းသပ်တာဖြစ်သလို
Relationship/Friendship တစ်ခုချင်းစီမှာ ဇကာ တစ်ခု တပ်ကြည့်တာပါပဲ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မပါတဲ့ ရွာထဲက
ကျနော့ ကို အလိုမကျတာများရှိရင်
မှားခဲ့ရင်တော့ တောင်းပန်ပါ့မယ်။ မရေရာရင် ပြန်ငြင်းပါ့မယ်။ မဟုတ်ပဲ ပြောရင် ရန်ဖြစ်ပါ့မယ်။ သွေးနည်း ရင်တော့ မလာပါနဲ့။
ဦးကြောင်ကြီး says: ခင်ဇော်လင်တော်ကြင်ဖော်ဂွင်ဆော်
ခင်ဇော် says: ဥကြောင်
alinsett says: မနေ့က ရွာသူအသစ်တင်တဲ့ပိုစ့်ထဲမှာ
ကျနော့်ကို အောင်မဲလင်း လို့ ခေါ်ဆိုသုံးနှုန်းသွားတာကို လုံးဝ လုံးဝ
မနေကျပ်ဖူး အဲလေ မကျေနပ်ဖူးးးး
အဲ့ကိစ္စကနေ စ ရန်ဖြစ်ကြမယ်
.နောင်ဗိန် နောင်ဗိန် နောင်နောင်းဗိန်ဗိန် ဂျိ ဂျိ
ခင်ဇော် says: နာ အောင်ရဲလင်းကို ကြွေနေတဲ့ အချိန်မှာ
နိ က နိကိုနိ အောင်ရဲလင်းထက် အောင်ရဲလင်းနဲ့သူသော အောင်ရဲလင်း လို့ ပြောထားတာကို မကျေနပ်လို့လေ။
ဂျိပေဂျိ (ခွက်ဒစ် တူ အောင်မဲလင်း)
Tawwin Pan says: ကိုအလင်းဆက်ရေ
အပါချီဘိလပ်မြေပြက္ခဒိန်ထဲကအောင်ရဲလင်းလို အဖုအထစ်နဲ့ပုံလေးရိုက်တင်ရင်တော့ ယုံကြမယ်ထင်တာပါပဲ……..ဟိဟိ
ခင်ဇော် says: တော်ကြာ
စစ်ပက် ရအောင် ပါမုန့် ၆လုံး ကြိုးနဲ့ ဆိုင်းချည်ပြီး ရိုက်နေမှဖြင့်
alinsett says: ကျနော်က အောင်ရဲလင်းကိုယ်တိုင်ထက်တောင် အောင်ရဲလင်းနဲ့ ပိုတူသေး…
.အောင်ရဲလင်းတောင် ကျနော့်လောက် အောင်ရဲလင်းနဲ့ မတူဘူး။
ကျနော်က အောင်ရဲလင်းနဲ့ မျက်နှာတွေ ဘာတွေ သိပ်မတူပါဘူး။
အဓိကတူတာက…ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်နဲ့ အသားအရည်ပါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 188
Nyo Win says: ခင်ဇော်ကြီး….ဘာဖြစ်လို့ လား ….. :D
ခင်ဇော် says: ခုမှ ပေါ်တော်မူလာတဲ့ ကိုဂျီးညိုကိုလည်း မကျေနပ်ဘူးး
မီးမ မရပါဇီနဲ့ ဗျာ။
HMM says: အဆီကျအောင် အခါးများများ စားမလို့ဆိုလား
အောင် မိုးသူ says: မကျေနပ်ဘူး မကျေနပ်ဘူး အချို့ အတည်တကျရေးတဲ့ပို့စ်တွေမှာ ပြောင်ချော်ချော် နောက်ချော် တွေကို မကျေနပ်ဘူး။ ဟိဟိ စတာ နောက်တာ အတည်ပြောတာ
နာ့ ကို ကော်မန့်အတည်ပေးခိုင်းတယ် ဟွတ်လားး
နိ ကိုလည်း နာ့ထက် အသက်ငယ်ပြီး နာ့ထက် တော်လို့ မကျေနပ်ဘူး သိရဲ့လားး
နာ အဲ ဒီ အရွယ်တုန်းက အတော် အောင်ကြာကြူးးး
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: သွေးကြောင်ရင် ဘေးရှောင်နေတာကြာဘီ
ရွာထဲမပြောနဲ့ ရွာပြင်ကတောင် မချောင်းဘူး
ဘုမှ ဂုမစိုက်ဘူးဝေ့ သတ္တိရှိတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့
ခင်ဇော် says: မျောက် ကို နပိ သုတ်လိုက်ရ
လုံမလေးမွန်မွန် says: မမဂျီးကို ချစ်မိပြီးနောက်ပိုင်း မမဂျီးနဲ့ တူတူလာတာ မကျေနပ်ပုစ် . . . ဘော်ဒီကအစ . . . Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ပါစင်နယ်ဒေ ပါလာရင် ရန်ဖစ်မှာနော်။
တောင်ပေါ်သား says: ခင်ညားဂျီးကို မကျေနပ်တာ ကြာခဲ့လို့ ဘယ်တုန်းကမှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး ၊
ခင်ညားဘော်ဒီကိုကြောက်လို့ ငြိမ်နေတယ်မှတ်ပါ ၊
ခင်ဇော် says: လာဗျန်ဘီ။
ဒီ ဘော်လီကို ထိရင် နောက်ခါဆို ကိုင်ပေါက်မဲ။
Kaung Kin Pyar says: အကြိုက်ချင်းတူနေလို့ လာရင် လုစားရအောင် လက်မြန်သိုင်း ကျင့်နေတယ်… အစင်လေးတွေ အကြိုက်တူသမျှ.. အသက်ကြီးတဲ့ အားကိုးနဲ့ မမဂျီးကို ဦးစားပေးရမယ်နော် လို့ပြောပြောပြီး ဦးစားပေးခိုင်းတာ မကျေဖူးးးး.. (အဲ့ဒီက စမားးးးး ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ဟီးးး ကောင်းတယ်။
တွေ့လို့ ဓာတ်သေရိုက်ရင် မက်နှာ ဘူပိုကြီးတုန်း ပြိုင်မားး
နာကွ ခင်ဇော် (ခွက်ဒစ် ကိုကိုကြောင်)
alinsett says: .မျက်နှာ ဘေးတစောင်းပုံ ရိုက်လို့မှ… မမကြီးပုံက…မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်နဲ့ သွားတူနေရင်…
အနော် ပြဿ နာ ရှာမယ်နော်.. ဟိုတယောက်…. ကကပ… သူကတော့ ဘယ်လိုရိုက်ရိုက်…တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံလေးနဲ့…တူပြီးသား..
နာ့ ညလေးး ကိုပါ ဂွမ်းပုံ နဲ့ တူခိုင်းးပြန်ပြီ..
ဆန်းးမီ လေထိုးးလေးးကို မပြောနက်.. ???
Kaung Kin Pyar says: အမွှေးနှုတ်ထားတဲ့ နှံပြည်စုတ် အကြောဆွဲပြီး တောင်ပံ ထ ခတ်ပြန်ပြီ… လက်လက်ဆင်မ
ကက်တလီယာတွေ သိပ်မပွင့်နဲ့ သပ်လားးး
ဒီလေလောက်နဲ့ ဖုန်တောင် မထ ဘူးးးး ဟူးးးဟူးးးး
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဒါဗျဲ
.တွားလိုက်ပါအုံးမယ်နော်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: မိုက်လားးး
ရာမည says: ပြောပြော
Tawwin Pan says: မနေ့တုန်းက သူ့ကိုယ်သူ ကိုကြီးခင်ဇော်ဆိုပီးမိတ်ဆက်တယ်။ မသိနားမလည်တဲ့ ရွာသူအသစ်လေးကို အဲလိုလုပ်တာ ကျေနပ်ဖူးရယ်။ အဟုတ်မှတ်ပီးအားကိုးမိရင်တော့ဒုက္ခ။ အာ့ဒါဘယ်လိုရှင်းမလဲ။
ခင်ဇော် says: ငှယ်။
ဂျက်စပဲရိုး says: ဘာ မကျေနပ်တာ ရှိလဲ ဟုတ်စ…
စားစရာတွေ မျိုးစုံ လုပ်စား ချက်စား လုပ်နည်းတွေ သူများ ကို မေး ပြီးရင် ချက်နည်းတွေ ရော ရလဒ် တွေ ရော ပုံနှင့် တကွ တွေ တင်။
တစ်ခါမှလဲ ခေါ်မကျွေးဘူး ဟွင်း ဟွင်း
ချက်စားရအောင်ကလဲ ဒီမှာက ချက်မရ တာနဲ့ ဆိုတော့ကာ….
မကျေနပ်ဘူးးးးး :P :P :P
အာ့ဒါ တဂျီး ကြောင့်ပေါ့။ နာ လည်း မစားရ ဝခမန်း လိုက်မေးပြီး လိုက်တောင်းနေရတာ။
Ma Ma says: ပတ်တနာကို မီးခွက်ထွန်းရှာရမလားလို့ စဉ်းတုံး အဲ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့…………….
ဆိုင်ဆိုင် မဆိုင်ဆိုင် ၀င်ကြွားခြင်းးးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အဲဒါ ဆို ခီန ခီန မပျော်ရွှင်ရတော့ဘူးပေါ့။
Mr. MarGa says: ဘယ့်နှာကြောင့် ဒီကွန်မန့်က စိမ်းနေရတာတုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: တဂျီးး ဆိုက်ကြီးး
All comments page မှာ ထိမိရင် စိမ်းးစိမ်းးနေတာ..
အတော် ဆန်းးဆန်းးတင့် ဖစ်နေတယ်.. ဒီ တဂျီးးး
kai says: ဇီဇီက ကံကောင်းပြီး အဲဒီဆေးတောင်ဝှေးရထားတာ..
ကျုပ်မတော့.. စိမ်းချင်တာတောင် စိမ်း၍မရ..။
အနိစ္စ…။ Was this answer helpful?LikeDislike 154
HMM says: မကျေနပ်တာတွေ တန်းစီရေးရရင် အရှည်ဂျီးရေးနေရမှာပျင်းလို့ မရေးတော့ဘူးလို့လာပြောတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အပျင်းး အစုတ်ပလုတ်လေးးး
စားချင်တဲ့ စာရင်းး ရေးးခိုင်းးရင်တော့ ပျင်းးမီ မထင်င်င်င်
HMM says: အာ့ဂဒါနဲ့ အာ့ဂဒါ တူဝူးလေ..
အာ့စာရင်းတောင်မှ စားရမှာသေချာမှ ရေးမှာ…
မသေချာရင်တော့ ဟင့် ပျင်းတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အစင်လေးတွေကြိုက်လိုက်တိုင်း တူနေတာ၊ နိကြိုက်သမျှလဲ၆၆သွားတာ နာ့ဟာလေးတွေကုန်ဘာဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: ထု ရော
ဘူ့ ကို ကြိုက်နေလဲ
ဘူ့ ကို ကြိုက်ပေးးရမလဲ..
alinsett says: မမခွိုင်ဇာကို မကျေနပ်ချက် (၂)
ကျနော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ပေါပ့်ဗျင်ဂျီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့ MTV တွေ သီချင်းရုပ်သံဖိုင်တွေ ဖွင့်ကြည့်မိတိုင်း..
မမခွိုင်ဇာကြီး ဘေးတစောင်းရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေချည်း မြင်ယောင်မိနေတာ…
ခင်ဇော် says: နိ မတရားးဒါ ကျန်းးးး
နာ့ကျ မိုက်ကယ်ကြက်ဆင်နဲ့ဇွတ်တူခိုင်းးဒယ်..!! သူ က အောင်ရဲလင်းးဒဲ့.. နာ က ဒူးပြတ်ဒါဒါ ဟဲ့..!!
မယ်လိုဂျီ ဟဲ့ …
အထက်ပါကိစ္စများနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ရွာသူကြီးမှတပါး အခြားပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ပြောရေးဆိုခွင့်မရှိကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါသည်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: သဘောကျ လွန်းးလို့..
ဆိုးး ကောလ် မေမေစု
တဂျီးး က အာ့လို အနိုင်ကျင့်ရင်တော့
Swal Taw Ywet says: တို့ ကတော့ ကျောက်ပေါင်။
ခင်ဇော် says: ဘူမှ မကြောက်တာာာာာ
naywoon ni says: ကြိုက်​တယ်​တယ်​ မင်းလုပ်​သမျှ ကြိုက်​တယ်​
ကြိုက်​တယ်​ မင်း​ပြောသမျှ ကြိုက်​တယ်​
ဟီး ဘာမှ မဟုတ်​ ​ကော်​နီ့ သတိရ လို့ သူ့သီချင်း ဆိုကြည့်​တာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: အာ့ဒါ တွန့်တွန့်ထွင်းး သီချင်းးပါ…
Mr. MarGa says: မကျေနပ်တာလား?
ပြဿနာကို မရ ရအောင်မီးခွက်ထွန်းပြီး ရှာနိုင်တာကို မကျေနပ်ဘူး :P
အဲဒီကနေ စားစရာကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ စားပြနေတာကိုလည်း မကျေနပ်ဘူး
ဒါဗျဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: လူ က နေပေမယ့်
အဂ္ဂမဟာ ပြောင်ကြီး says: . ကြိုက်သွားပြီ
. မျက်နှာရော ဘာသော ညာသော ပြောင်ပြောင်ကြီး ပြောင်ရဲတဲ့ လူဆိုတော့ ခေသူ မဟုတ်ဘူး
. ပြောင်ကြီးနဲ့ ပေါင်းလို့ရပြီ .. ရှိတ်လိုက်ပါဦး ..
ခင်ဇော် says: ပြောင်ပြောင် ကြီးး